ပန်ဒိုရာ: Building Trust
tRusT TRUST TruSt turst TRUSt TruSt TruST TRUST trust TRuST tRUST trust TRUST trust Trust tRUST TRUST tRusT TRUST TruSt tRUst TRUSt TruSt TruST TRUST trust TRuST tRUST trust TRUST trust Trust tRUST TRUST tRusT TRUST TruSt tRusT TRUST TruSt trust trust trust trust trust trust trust trust trust trust trust trust trust trust trust trust trust trust TRUST TRUST TRUST TRUST TRUST TRUST tRUst Trust TRuSt tRusT TRUST TruSt turst TRUSt TruSt TruST TRUST trust TRuST tRUST trust TRUST trust Trust tRUST TRUST tRusT TRUST TruSt turst TRUSt TruSt TruST TRUST trust TRuST tRUST trust TRUST trust Trust tRUST TRUST tRusT TRUST TruSt tRusT TRUST TruSt trust trust trust trust trust trust trust trust trust trust trust trust trust trust trust trust trust trust TRUST TRUST TruST TRuST TrUST Trust tRUst Trust TRuSt tRusT TRUST TruSt turst TRUSt TruSt TruST TRUST trust TRuST tRUST trust TRUST trust Trust tRUST TRUST tRusT TRUST TruSt turst TRUSt TruSt TruST TRUST trust TRuST tRUST trust TRUST trust Trust tRUST TRUST tRusT TRUST TruSt tRusT TRUST TruSt trust trust trust trust trust trust trust trust trust trust trust trust trust trust trust trust trust trust TRUST TRUST TrusT tRUst Trust TRuSt TRUST TRUST TRUST TRUST TRUST TRUST TRUST TRUST TRUST TRUST TRUST TRUST tRusT TRUST TruSt turst TRUSt TruSt TruST TRUST trust TRuST tRUST trust TRUST trust Trust tRUST TRUST tRusT TRUST TruSt turst TRUSt TruSt TruST TRUST trust TRuST tRUST trust TRUST trust Trust tRUST TRUST tRusT TRUST TruSt tRusT TRUST TruSt trust trust trust trust trust trust trust trust trust trust trust trust trust trust trust trust trust trust TRUST TRUST TRUST TruST TruST TRUST tRUst Trust TRuSt tRusT TRUST TruSt turst TRUSt TruSt TruST TRUST trust TRuST tRUST trust TRUST trust Trust tRUST TRUST tRusT TRUST TruSt trUst TRUSt TruSt TruST TRUST trust TRuST tRUST trust TRUST trust Trust tRUST TRUST tRusT TRUST TruSt tRusT TRUST TruSt trust trust trust trust trust trust trust trust trust trust trust trust trust trust trust trust trust trust TRUST TRUST TruST TRUST TrUST TRuST tRUst Trust TRuSt tRusT TRUST TruSt turst TRUSt TruSt TruST TRUST trust TRuST tRUST trust TRUST trust Trust tRUST TRUST tRusT TRUST TruSt turst TRUSt TruSt TruST TRUST trust TRuST tRUST trust TRUST trust Trust tRUST TRUST tRusT TRUST TruSt tRusT TRUST TruSt trust trust trust trust trust trust trust trust trust trust trust trust trust trust trust trust trust trust TRUST TRUST TRUST tRUst Trust TRuSt TRUST TRUST TRUST TRUST TRUST TRUST TRUST TRUST TRUST TRUST TRUST TRUST
Posted by pandora at 3:52 PM
ထရပ်စ်သရီးဒီ ၊ ထရပ်စ်ပုံစံ ၊ ထရပ်စ်ပန်းချီ ကုန်ပေမယ့်
ထရပ်စ်လှိုင်းလုံး သေးကွေးနိမ့်မြင့် စောင်းလျားတည့်ကျဉ်း
မျှင်းမျှင်းမကျန် ရိုက်ပုတ် လှုပ်ရှား ထရပ်စ်ကမ်းစပ်ကမျှော်
အနီရောင် ထရပ်စ်တော့သေချာသား ။
အရီးပန်ရယ်... လေးမကိုက ညံ့ပါတယ်.။ မှန်ထောင်ကြည့်တယ်... နောက်ပြန်..ဇောက်ထိုး... စာလုံးတွေကို ပုံဖော်... ။ ပညာရှင့် အာဘော်ကိုမမိပါလားနော်...။
tRuSt ကို ရိုးရိုး ရှင်းရှင်လေးပဲ မြင် တွေး သွားပါတယ် ... :)
မပန်... ကိုအိမ်က မပန်နဲ့ဆင်တယ်။ အတွေးချင်းတူတယ်ထင်ရဲ့။ သိုးလေးကတော့ သိပ်နားမလည်ဘူး။ trust ကို Trust လို့ပဲ ဘွင်းဘွင်းပဲ တွေးလိုက်ပြီနော်။
Oops!!!...Different form of building trust!!
ယုံကြည်မှုကို စကားလုံးတွေနဲ့ တည်ဆောက် လို့ရပါသလား။ လက်တွေ့ကျကျ ပြဖို့လိုတယ်။
ပန်ဒိုရာရေ … ခင်မင်တယ်ဆိုရင် စကားလုံးတွေနဲ့တင် မရ၊ မုန့်ကျွေးပါ။
ယုန်ကြီမု တီစောက်ချင်း ကမှ သတ်ပုံပိုမှားမှာ။ ကိုမောင်ရင် ရေးတာထက် ကျနော်ရေးတာကမှ အမှန်၊ ကျနော်ပြောတာကမှ အဟုတ် ဒီတော့ ကိုမောင်ရင် ပြောနေတာတွေကို ပြင်ရင်ပြင် မပြင်ရင် ရပ်တန်းက ရပ်မှ ကျနော်တို့ ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်လို့ရတော့မပေါ့။ :D
ယုံကြည်စိတ်ချရမှုဟာ မျက်နာဖုံး စွပ်လိုက်သောအခါ (သို့) ပုံစံအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲ၍ ၀င်လာသောအခါ အဆုံးစွန်ထိ (အဆုံးစွန်ထိ) ( ထားပါလေ… အဆင့်တစ်ခုအထိ) ဘယ်သောအခါမှ ယုံကြည်ချင်စရာ မကောင်းဆုံး ထိုယုံကြည်မှု ဆိုသောစကားလုံးသည် ယုံကြည်မှုထဲမှာပင် နှစ်မြုပ်ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်သည်ဟု ခဏလေးယုံကြည် လိုက်တော့သည်။ ယုံကြည်ချင်စရာ မကောင်းဆုံးသော ယုံကြည်မှုဟူသော ထိုစကားလုံးကို အပင်ပန်းခံ ပုံစံအမျိုးမျိုးရေးပြ၍ အမှတ်တကယ် အကျိုးရှိစေမည့် ယုံကြည်မှုကို အကောင်ထည်ဖော်စေလိုသော စေတနာအတွက် အသိမှတ်ပြုပါသည်။ ထိုသို့ရှည်လျားစွာ စဉ်းစားမိလာအောင် ဖန်တီးထားခဲ့သော အနုပညာအတွက် လေးစားပါသည်။ ခံစားသူ ကို အင်မတန် ခေါင်းစားစေရန် ဖန်တီးပေးခဲ့သောသူအတွက် တန်ပြန်ခေါင်းစားစေလိုသည့် အချက်မှာ မယုံကြည်မှု၏ နောက်ထပ်တဆင့်သည် သံသယကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သံသယ၏ အကျိုးဆက်သည် ယုံကြည်ချင်စရာ မကောင်းလောက်သော အခြေနေကို ရအောင်ရှာတော့မည်.။ ထိုအခါ မယုံကြည်ရမှုနောက် တကောက်ကောက် လိုက်ဖြေရှင်းသူသည်………. အင်း….. ပင်ပန်းတယ် လို့.. ဆိုကြပါစို့…။ ဟဲ။
နိုင်ဆိုတဲ့အိမ် >ထရပ်စ်တွေနဲ့ပဲ ကမ်းကပ်ဖို့ ကြိုးစားရမှာပ။ ထရပ်စ် ပင်လယ်ကျယ်ကတော့ ကျယ်မောလှတယ်။
လေးမ >ကြည့်သလိုမြင်မှာပါ။ ပညာရှင်မဟုတ်။ ပညာရှုပ်။
ကိုစိုးထက် >ခံစားသွားတာ ကျေးဇူးပါ
သိုးမလေး >aအရှင်းဆုံးက အလှဆုံးလို့လည်း ကြားဖူးတယ်။
ပီတိ၀၀ >အရင်ကျွေးမှ ကျွေးမှာပေါ့။ ယုံလို့မရဘူး. ဟဟ
ကိုမောင်ရင် ကိုစေးထူး. > ခင်ဗျားတို့ ဒီလိုငြင်းနေပုံနဲ့ ယုံကြည်မှု ဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမှာလဲ ဒီဘလောက်ထဲ လာရေးရင် ဘလောက်ရှင်စကားကိုပဲ လိုက်နာရပေမယ်။ ဒါမှ ယုံကြည်နိုင်တော့မပေါ့။
မောင်တက် > ဒီလိုလှည့်ပတ် ရှည်ကြော အချိန်ဆွဲ စကားကြောရှည် ပရိယာယ်လုပ်ရင်း ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်တယ် ဆိုရင်တော့ သံသယဖြစ်ဖွယ်ပဲ.. အဟက် အဟက်